Teregiramu inovandudzwa nekuwedzera vhidhiyo uye pikicha dhizaini uko patinogona kuwedzera zvitambi, masiki uye zvinyorwa | IPhone nhau
Kupesana nematambudziko ese, pamwe nekusunungurwa kweIOS 10, WhatsApp yakaburitsa inogadziridza ichitora mukana weimwe mitsva mitsva inobvumidzwa neIOS 10 vagadziri, chimwe chinhu chatisina kujaira sezvo kambani seyakajairwa kazhinji inotora mwedzi mishoma kutora mukana nemabasa matsva, kana ikazongozvibatanidza, nekuti makore maviri mushure mekuratidzwa kweApple Watch uye neZvinopfuura gore mumusika isu hatigone kupindura zvakananga kubva kuApple smartwatch kana tikatambira meseji uye sezviri pachena haina kuona kuti zvichazomboitika.
Ivo vakomana kubva kuTeregiramu vangoburitsa iyo yekuvandudza yekutumira mameseji iyo vakawanda uye vazhinji vashandisi vari kushandisa yenhamba hombe yesarudzo uye pamusoro pazvo zvese kuti uve multiplatform. Mune ino gadziriso, Teregiramu haina kuwedzera mukana wekukwanisa kutumira mune meseji kuburikidza naSiri, sarudzo iyo sezviri pachena isu tichafanirwa kumirira kuti tigone kunakidzwa nayo.
Mune ino nyowani nyowani Teregiramu yawedzera a nyowani pikicha mupepeti, vhezheni 2.0 iyo inotibvumidza isu kudhirowa pane iwo mafoto uye kuwedzera zvitambi kana zvinyorwa, zvimwechetezvo chinhu chimwe chete icho chatinogona kuita neiyo iOS 10 Messages application.Asi yakawedzerawo mugadziri wemavhidhiyo nemaGIFs atinogona zvakare kuwedzera zvinyorwa uye zvinonamira.
Kana iwe uchida kusangana nevanhu vese vapepeti veiyo Actualidad iPhone Podcast, in Teregiramu takagadzira boka kwaunogona kubvunza kusahadzika kwako, taura nezve izvo zvaunoda ...
Chii chitsva mushanduro 3.12 yeTeregiramu
Photo mupepeti 2.0: ikozvino unogona kudhirowa pamifananidzo yako uye kushandisa masks akanakisa, zvitambi uye zvinyorwa. Izvo zvinoshandawo pamavhidhiyo. Tiri kuvhura yedu ganda chikuva nhasi; chero munhu anogona kurodha yavo yega masiki, ndebvu, magirazi uye nezvimwe.
Waita zvakanaka GIF kusikwa: Kurumidza kugadzira ako maGIFs kana uchipfura mavhidhiyo neiyo nyowani 'mbeveve' sarudzo. Izvo zvinoshanda zvakanyanya kana iwe ukawedzera zvinyorwa uye zvitambi.
Uye sebhonasi, iwe unogona ikozvino kuwana izvo zvinonamirwa zvitambi zvakananga kubva kune anonamira mapaneru mune chero ehurukuro dzako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » App store » Teregiramu inovandudzwa nekuwedzera vhidhiyo uye pikicha dhizaini patinogona kuwedzera zvitambi, masiki uye zvinyorwa